Mareykanka iyo Kenya oo Kawada hadlay Dagaalka Ethopia iyo Doorashadda Soomaliya
Home Warar-ka Mareykanka iyo Kenya oo Kawada hadlay Dagaalka Ethopia iyo Doorashadda Soomaliya
Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa kawada hadlay dagaaladda ka socda dalka Ethopia ee u dhaxeeya Ciidamadda Dowladda Ethopia iyo Jamhadda TPLF, iyo arinta doorashadda Soomaaliya oo la isku khilaafsan yahay.
Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, oo kulan wada yeeshay ayaa si qoto dheer kaga hadlay xaaladda ethopia dagaalo ay ka socdaan iyo doorashooyinka Soomaaliya.
Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in loo baahan yahay in deg deg loo xaliyo dagaalka ethopia ka socda oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed.
Sidoo kale waxa uu sheegay in walwal ay ku hayso arrinta Soomaliya gaar ahaan doorashadda oo lagu lumiyay waqtiga badan.
Waxa uu sheegay in arrinta Soomaaliya loo baahan yahay in la jiheeyo,islamarkana la xaliyo khilaafka Madaxda Soomaalida,gaar ahaan Madaxweynaha iyo Raisulwasaaraha xilgaarsiinta.
“Madaxweynaha Kenya iyo aniga waxaan kawada hadalnay xaaladda dalka Ethopia iyo dagaalka ka socda,iyo sidii loo xalin lahaa, sidoo kale waxaan kawada hadalnay in Madaxda Soomaalida ay soo gaba-gabeeyaan doorashadda si waqti loo luminin”, ayuu kusoo daabacay bartiisa twitter-ka Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken.
Mareykanka ayaa dhawaan ka hor yimid falkii uu ku kacay Madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), kaasi oo lagu eedeeyay in dalka afgambi la damacsanaa.
Previous articleQoor-qoor oo Kulamo Kawada Muqdisho, Xubno Diiday
Next articleAxmed Madoobe oo La Kulmay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Lagu Doortay Jubaland